Dị iche iche Àgwà nke igwe anaghị agba nchara - China Richina
Dị iche iche Àgwà nke igwe anaghị agba nchara
Richina na-pụrụ iche na iche iche nke igwe anaghị agba nchara Garden Tools, Ma ọtụtụ ahịa nwere ike ịtụle ihe ụdị igwe anaghị agba nchara na-eji ndị a Garden Tools, Gịnị bụ dị iche iche àgwà nke igwe anaghị agba nchara?
Ọ bụghị ihe niile igwe anaghị agba nchara bụ nke otu àgwà na mejupụtara. The ọzọ nickel na chrome na isi ígwè alloy, na ike na ndị ọzọ inogide na ọ bụ. N'ihi ya, ọ bụ ihe dị oké ọnụ na igwe na-Polish. Igwe anaghị agba nchara flatware mere si otu n'ime ọtụtụ dị iche iche alloys. Ndị akacha eji alloys bụ 304, 410, 420 na 430.
Ke adianade ígwè, ndị alloy 304 e dere ihe anwụ ngwa ngwa nke 18% chrome na adụ luster nke 8% nickel. Nke a ọgaranya ngwakọta nke chrome na nickel-enye kacha nchara na corrosion nchedo. 18/8 igwe anaghị Ẹda kasị ukwuu na a hụrụ na ndị kasị mma igwe anaghị agba nchara flatware. Na Europe, ihe 18/10 mejupụtara na-eji, nke bụ Ẹkot US ọkọlọtọ 18/8.
￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼The alloy 430 nwere 18% chrome na dịghị nickel. Ịchụ ihe echekwa obibia, 18/0 igwe anaghị nwere nnukwu anya na obi na-adị 18% chrome, nakwa dị ka a inogide, elu Polish imecha. Ọ na-enye ndị magburu onwe iguzogide nchara na corrosion. 18/0 igwe anaghị eweli dịtụ mma ka arọ azụmahịa were ma adịghị egboro ndị na-adịgide adịgide luster nke 18/8.
410 igwe anaghị agba nchara alloy nwere 13% chrome na dịghị nickel. 13/0 igwe anaghị agba nchara na-enye mma na a obi umeala price kamakwa bụ onye kasị nta eguzogide corrosion na rusting. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị mgbe price bụ n'elu echiche.
Anyị Garden Tools, gụnyere Garden nnukwu egwu ala ngwaọrụ ma ọ bụ Garden Small Hand Tools, na-mere nke 420 alloy,
Nke a na elu-carbon, 13% chrome ihe kwesịrị ruru eru ka agụba ibe ya bụrụ na utịp ke a nkọ mbepụ.